Pfungwa dzekushandura zvemukati kuita Shanduko | Martech Zone
Pfungwa dzekushandura zvemukati kuita Shanduko
Muvhuro, October 14, 2013 Svondo, October 13, 2013 Douglas Karr
Kana usati wanzwa nezvazvo Ion inopindirana, unofanirwa kunyatsovatarisa. Kwete chete ivo vane imwe inonakidza yewebhu-based software yekugadzira uye kuyedza zvinobudirira kumhara zviitiko, ivo zvakare vanopa matani ekutsigira data uye akanakisa maitiro emabhizinesi. Ivo vanotaura pazviitiko zvakawanda munyika yese zvakare uye vanogara vachipa hukuru zvemukati. Iyi infographic haina kusiyana:
Iyo inokurumidza kutaurwa kwekuita zvakanyanyisa zvemukati wako nemapeji ekumhara. Iyo infographic inoratidzira mapfumbamwe akasarudzika matekiniki ekutsvagisa mari pamablog, mapepa machena, infographics uye masiraidhi ekutsikisa echizvarwa chinotungamira.
Kufarira kuverenga zvimwe? Bhalisa kuti ugamuchire ion's-15-peji Kuenda Mapeji eChinyorwa Kushambadzira Idea Bhuku. Tora kudzika kwakadzika mukati mematanho gumi nemapfumbamwe akafukidzwa muiyo infographic mune inobatsira, inogona kurodha pasi .pdf.
Tags: zvemukati zvekushambadzira mazanokutendeukaionIon inopindiranakumhara peji pfungwakumhara peji mazanopamapejimhando dzemapeji ekumhara
Zvemagariro Kushambadzira Kunoda Kufunga Nhare